Jarmalka oo 1,500 qaxooti ah ka soo qaadaneysa dalka Gariiga | HalQaran.com
Home Jarmalka Jarmalka oo 1,500 qaxooti ah ka soo qaadaneysa dalka Gariiga
Jarmalka oo 1,500 qaxooti ah ka soo qaadaneysa dalka Gariiga
Berlin (Halqaran.com) – Dowladda Jarmalka ayaa wadda qorshe ah inay 1,500 oo qaxooti ah ka soo qaadato dalka Gariiga, islamarkaana ay siiso deganaasho.
Angela Merkel, hoggaamiyaha dalka Jarmalka iyo wasiirka arrimaha gudaha Horst Seehofer ayaa isku raacay tallaabadan, waxaana xooga la saari doona dadka qaxootiga ah ee carruurta wata.
Dowladda Jarmalka ayaa horay u go‘aamiyay in ay qaadato 150 carruur aan cidna la socon, kuwaas oo qeyb ka ahaa qorshaha Midowga Yurub ee lagu taageerayo ilmaha aanay cidna wehelin ee qaxootiga ku ah dalka Gariiga.
Cadaadiska dalaka Yurub lagu saarayo in ay aqbalaan qaxootiga ayaa yimid, kaddib markii dab qabsaday xero qaxooti oo lagu magacaabo Moria, waxaana ku guro beelay oo iminka dibadda ka jiifa 12,000 oo qof oo haween iyo carruur ay ku jiraan.
500 qaxootiga ah ka soo qaadaneysa dalka Gariiga
Jarmalka oo 1